ExcEL Awards 2019 ဆုရှင်များ ကြေညာ - DVB
Lead Story သတင်း သတင်းမီဒီယာ
ExcEL Awards 2019 ဆုရှင်များ ကြေညာ
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှက အကောင်းဆုံးသတင်းရေးသား တင်ဆက်ထုတ်လုပ်မှုတွေအတွက် အသိအမှတ်ပြု ပေးအပ်ချီးမြှင့်တဲ့ ExcEl Award 2019 ဆုရရှိသူတွေကို အင်ဒိုနီးရှားမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့(PPMN)က ကြေညာပါတယ်။
ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီအနေနဲ့ အင်ဒိုနီးရှား၊ မြန်မာ၊ မလေးရှားနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေက ဂျာနယ်လစ်တွေထံကနေ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းပေးပို့ချက်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအထဲက ကြားဖြတ်သတင်း၊ သတင်းဆောင်းပါး၊ သရုပ်ဖော်ဆောင်းပါး၊ စုံစမ်းဖော်ထုတ်သတင်းနဲ့ ထင်မြင်သုံးသပ်ချက် ကဏ္ဍတွေအတွက် ဆုရရှိဖို့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတာပါ။
ဆုချီးမြှင့်ပေးအပ်ဖို့အတွက် အကဲဖြတ်ဖို့ ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲဝင် လူကြီးတွေအဖြစ် နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံက ဝါရင့်သတင်းသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက အကြီးတန်းဂျာနယ်လစ် ဘမ်ဘန်းဟာရီမာတီ (TEMPO/ Indonesia)၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက SEAPA အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဟောင်း တက်စ်ဆာဘာကယ်လာ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီဗွီဘီ သတင်းဌာနက အကြီးတန်းဂျာနယ်လစ် ဦးခင်မောင်စိုး၊ ဟောင်ကောင် ဘက်ပ်တစ်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ ချာရန်ဂျော့ချ်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ Khaosod သတင်းဌာနက အကြီးတန်းဂျာနယ်လစ် ပရာဝစ်ရိုဂျနာပရပ်ခ် တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူအားလုံးကို ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က ပြိုင်ပွဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း စံသတ်မှတ်ချက်တွေအရ အကဲဖြတ်ဆုံးဖြတ်ပြီး ExcEl Award 2019 ဆုရရှိသူတွေကို အောက်ပါအတိုင်း ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
Khalida Meyliza နှင့်အဖွဲ့ (Kompas TV, Indonesia)
“Money Politics in the Vortex of Legislative Election”
Karol Ilagan & Malou Manganas ( PCIJ- Philippines)
“May 2019 Elections: Fraud-free? Fault-free? “A billion-peso blunder:6in 10 machines to verify voters conked out, not used at all”
ဒုတိယ အကောင်းဆုံးဆု –
Dieqy Hasbi Widhana ( Tirto.id, Indonesia)
“Fighting Over Mosque and The Ugly of Identity Politics.”
Arkhelaus Wisnu Triyogo & Danang Firmanto (Tempo Newspaper, Indonesia.)
“PPP Require Legislator Candidates to Deposit Rp 500 Million”
Special mention for feature အထူးဆု
Agnes Theodora & A Ponco Anggoro ( Kompas Daily, Indonesia.)
“Ignoring the Political Reality of 2014”
-Special mention for commentary အထူးဆု
Brita Putri Utami ( Solider.id, Indonesia)
“Why disability issues matter in the 2019 Indonesian legislative elections?
ပထမဆုရရှိသူအနေဖြင့် ဆုကြေး ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ၊ ဒုတိယဆု ဒေါ်လာ ၈၀၀နဲ့ အထူးဆုတွေအဖြစ် ဒေါ်လာ ၅၀၀ ဆီရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆုရရှိသူအားလုံးအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်။
Best Winner: Karol Ilagan and Malou Manganas from PCIJ, Philippines. The title of work is May 2019 Elections: Fraud-free? Fault-free? “A billion-peso blunder:6in 10 machines to verify voters conked out,
Tags: ExcEL Awards 2019 ဆုရှင်များ ကြေညာ
Previous story အယ်ဘေးနီးယားငလျင် သေဆုံးသူ ထပ်တိုးလာ
Next story မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ဒုံးကျည် ၂ စင်း ပင်လယ်ထဲ ပစ်လွှတ်